Iftiinka qolkaaga musqusha ma kufilan yahay qurux? - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / blog / Iftiinka Meesha Musqushaadu ma ku fiican tahay?
Iftiinka Meesha Musqushaadu ma ku fiican tahay?
2021 / 09 / 13 Qoondayntablog 1501 0
Dugsiga Ganacsiga Musqusha
Meesha musqusha sida meel lagu nasto oo lagu nasto
Kaalin muhiim ah ayuu ka ciyaaraa nolosha guriga
Waxaa ka mid ah, waxyaalo badan oo xamaasad leh iyo xariifnimo nololeed
waxay u soo baxayaan halkan si ay u koraan
Arrintan, waxay kuu qaadan doontaa inaad sahamiso sida loo abuuro nalalka musqusha!
Meesha musqusha heerkulka midabka iftiinka
Iftiinka booska musqusha waa inuusan noqon mid aad u dhalaalaya ama aad u madow. Xulashada heerkulka midabka ee 4000-5000K waxay noqon kartaa. Midabkan iftiinku wuxuu abuuri karaa jawi iftiin leh oo jahawareer leh.
Chart Shaxda heerkulka midabka iftiinka
Meelo kala duwan oo ka shaqeeya qabanqaabada iftiiminta
Musqusha badiyaa waxay u qaybsan tahay saddex aag oo shaqaynaya: aagga maydhashada, aagga musqusha, aagga dhaqidda. Baahida iftiiminta ee aag walba way kala duwan tahay, sidaa darteed naqshadeynta iftiinka ee meesha musqusha waa inaysan buuxin baahiyaha nalalka aasaasiga ah oo keliya, laakiin sidoo kale la kulanto baahiyo shaqo oo kala duwan.
Meesha lagu qubeysto.
Meesha lagu qubeysto badiyaa waxay u qaybsan tahay “aagga qubeyska” iyo “aagga musqusha”. Labaduba waxay jiri karaan isku mar, laakiin sidoo kale si madaxbannaan. Meelaha kala duwan waxay leeyihiin naqshado iftiin oo kala duwan. Iftiinka aagga qubeyska ayaa lagu rakibi karaa saqafka, iyadoo la isticmaalayo nalka hoose ama naqshad xariijin iftiin qarsoon. Tani waxay ku habboon tahay maydhashada dhinac, dhinaca kale, waxay kaloo abuuri kartaa jawi.
Qubeysku waa habka ugu fiican ee lagu nasin karo jirkaaga iyo maskaxdaada. Dhibco yar oo nalal ah ama nalalka raad -raaca ee aagga musqusha waxay abuuri karaan jawi qubeys oo deggan oo raaxo leh.
Markaad dooranayso qalabka nalalka ee aagga musqusha, wax -ku -oolnimada iyo fududaynta waa in la siiyaa mudnaanta koowaad. Dad badani waxay ciyaaraan taleefannada gacanta ama wax akhriyaan markay musqusha isticmaalayaan, sidaa darteed iftiiminta aagga musqusha waa la tixgelin karaa marka la naqshadeynayo iyo xulashada inay daboolayso baahiyaha iftiin ee akhriska.
Aagga maydhashada ma aha oo kaliya inuu leeyahay hawsha dhaqidda iyo nadiifinta, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay dalabka qurxinta, sidaa darteed aaggu wuxuu leeyahay baahi aad u sarreeya oo iftiin ah. Waxaad si toos ah u rakibi kartaa nalalka muraayadda ama u diyaarin kartaa nalalka agagaarka muraayadda. Saamaynta iftiiminta ee leh nalalka ku wareegsan oo dhan ma ka dhigi doonto shanta dareen inay yeeshaan hoos iyo fududeynta qaadista qurxinta. Intaa waxaa dheer, nalalka gidaarka waxaa lagu rakibi karaa muraayadda si loogu daro dareen casri ah nolosha.
Hore:: Kobaca 371% VS 70% Hoos u dhac! Tartanka Suuqa Musqusha oo Dhan Miyuu Gaaray Marxaladda “Cad -kulul”? Next: Yaa Yidhaahda Musqulaha Yaryar ma noqon karaan kuwo aad u sarreeya? 11 Siyaabood Oo Aad Ugu Weyn U Qurux Badan Tahay
Tuubooyinka Musqusha ee Nikkel -ka la Jeexay - Ikhtiyaar Fiican adiga
2021 / 09 / 28 2250
Ku Samee Qorshe Qurxinta Musqusha Qubayska Musqulaha
2021 / 09 / 27 2196
Helitaanka Tubaale iyo Talooyinka Tuubooyinka si loo yareeyo Isticmaalka Biyaha
2021 / 09 / 25 2318
Talooyin Ku Saabsan Ilaalinta Tuubooyinka Musqushaada Meel La'aan Iyo Biyo la'aan
2021 / 09 / 25 4168
Ka dhig jikadaada mid xariif ah oo leh qasabadaha jikada
2021 / 09 / 24 2403
Qasabadaha Aagga Jikada - Doorashada Mid Wanaagsan
2021 / 09 / 24 2294